UThixo Uyabavuza Abo Bamfuna Ngenyameko| Efundwayo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseAngola Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseBritani Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseFransi Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMbunda IsiMingrelian IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUruund IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
“Lowo uzayo kuThixo umele akholwe ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfuna ngenyameko.”​—HEB. 11:6.
IINGOMA: 85, 134
Sinokuqiniseka njani ukuba uYehova uyabavuza abakhonzi bakhe?
UYehova ubavuze njani abakhonzi bakhe kwixesha elidlulileyo?
Usivuza ngantoni uYehova?
1, 2. (a) Uthando ludibana njani nokholo? (b) Yeyiphi imibuzo esiza kuyiphendula?
UYEHOVA simthanda “kuba wasithanda kuqala.” (1 Yoh. 4:19) Enye yeendlela uYehova abonise ngazo ukuba uyabathanda abakhonzi bakhe abanamathela kuye kukubasikelela. Xa sisiya simthanda uThixo wethu, nokholo lwethu luya lusomelela, singapheleli nje ekukholelweni ukuba ukho, kodwa nasekubeni akaze angabavuzi abo abathandayo.​—Funda amaHebhere 11:6.
2 Ukuvuza abakhonzi bakhe kubaluleke kakhulu kuYehova. Ukuze sibe nokholo kakuhle sifanele siqiniseke ukuba uThixo uza kubavuza abo bamfuna ngenyameko kuba “ukholo lululindelo oluqinisekisiweyo lwezinto ezithenjiweyo.” (Heb. 11:1) Ukuqiniseka ukuba uThixo uza kusisikelela njengokuba ethembisile kukuba nokholo. Kodwa, kusinceda njani ukuba nethemba lokuvuzwa? UYehova ubavuze njani abakhonzi bakhe kwixesha elidlulileyo nakweli lethu? Makhe sibone.
UYEHOVA UTHEMBISA UKUBASIKELELA ABAKHONZI BAKHE
3. Sithenjiswa ntoni kuMalaki 3:10?
3 UYehova uThixo uzibophelele ukuba uza kubavuza abakhonzi bakhe abathembekileyo, ngenxa yoko uthi masenze unako-nako ukuze asisikelele. EBhayibhileni sifunda oku: “‘Khanincede, nindivavanye, . .’ utsho uYehova wemikhosi, ‘enoba andiyi kunivulela kusini na amasango ezikhukula emazulwini ndize okunene ndiqongqothele phezu kwenu intsikelelo kude kungasweleki nto.’” (Mal. 3:10) Indlela esinokumbulela ngayo uYehova kukuba siyenze le nto ayitshoyo.
4. Kutheni sinokuwathemba amazwi kaYesu akuMateyu 6:33?
4 UYesu wabaqinisekisa abafundi bakhe ukuba xa uBukumkani buyeyona nto iza kuqala kubo, uThixo uya kubaxhasa. (Funda uMateyu 6:33.) UYesu wayeqinisekile ngaloo nto, kuba uYehova wayengazange angathembeki. Wayesazi ukuba izithembiso zikaThixo ziyenzeka. (Isa. 55:11) Nathi sinokuqiniseka ukuba xa sinokholo olupheleleyo kuYehova, uza kusigcina isithembiso sakhe esithi: “Andiyi kuze ndikushiye, ndingayi kuze ndikutyeshele.” (Heb. 13:5) Esi sithembiso sinokusidibanisa noko kwathethwa nguYesu ngokufuna kuqala uBukumkani nobulungisa bukaThixo.
UYesu wathi abafundi bakhe babeya kuvuzwa ngenxa yokuzincama kwabo (Jonga isiqendu 5)
5. Ukholo lwethu lomelezwa njani yimpendulo kaYesu kumbuzo kaPetros?
5 Umpostile uPetros wakha wambuza oku uYesu: “Sishiye zonke izinto saza sakulandela; yintoni okunene esiya kuyifumana?” (Mat. 19:27) Kunokuba amkhalimele uPetros ngokubuza oku, uYesu wathi abafundi bakhe babeza kuvuzwa ngenxa yezinto abazincamileyo. Abapostile nabanye abalandeli bakhe baza kulawula naye ezulwini. Kodwa ukho umvuzo nangoku. UYesu wathi: “Wonk’ ubani oshiye izindlu okanye abantakwabo okanye oodade okanye uyise okanye unina okanye abantwana okanye imihlaba ngenxa yegama lam uya kwamkela izihlandlo ezininzi ngakumbi yaye uya kudla ilifa ubomi obungunaphakade.” (Mat. 19:29) Abafundi bakhe babeya kufumana iintsikelelo ezodlula lee nantoni na ababeyincamile. Ngaba ootata, oomama, oobhuti, oosisi nabantwana esibafumene ebandleni abaxabisekanga ngaphezu kwayo nantoni na esiyishiyileyo okanye esiyincamileyo ngenxa yoBukumkani?
6. Kutheni uYehova ethembisa ukubavuza abakhonzi bakhe?
6 Ukwazi ukuba uYehova uza kubavuza kuyabomeleza abakhonzi bakhe xa bevavanywa. Abapheleli nje ekufumaneni intabalala yeentsikelelo zokomoya ngoku, kodwa banethemba lokufumana ezininzi nangakumbi kwixesha elizayo. (1 Tim. 4:8) Xa siqinisekile ukuba uYehova “ungumvuzi wabo bamfuna ngenyameko” siya kutsho sibe nokholo oluqinileyo.​—Heb. 11:6.
7. Ithemba lifana njani neankile?
7 KwiNtshumayelo yakhe yaseNtabeni, uYesu wathi: “Yibani nemihlali nixhume ngovuyo, ngokuba umvuzo wenu mkhulu emazulwini; kuba babatshutshisa ngaloo ndlela abaprofeti ababengaphambi kwenu.” (Mat. 5:12) Njengabo baza kufumana umvuzo wokuphila ezulwini, nabo baza kuphila ubomi obungenasiphelo kwiparadesi esemhlabeni bafanele babe ‘nemihlali baze baxhume ngovuyo.’ (INdu. 37:11; Luka 18:30) Nokuba siza kuphila ezulwini okanye emhlabeni, ithemba esinalo linokuba ‘yiankile yomphefumlo, liqiniseke yaye liqine.’ (Heb. 6:17-20) Kanye njengokuba iankile inceda inqanawa izinze xa kukho isaqhwithi, ukuqiniseka ukuba siza kufumana umvuzo kunokusinceda singaphakuzeli, singadyuduzeli kwaye ukholo lwethu lomelele. Kunokusinceda sikwazi ukumelana nobunzima.
8. Ukuba nethemba kusinceda njani sithobe amaxhala?
8 Izinto esizithenjiswa yiBhayibhile zinokusinceda sithobe amaxhala esinawo ngoku. Izithembiso zikaThixo ziyazithomalalisa iintliziyo zethu ezixhalabileyo. Kuyathuthuzela ‘ukulahlela umthwalo wethu kuYehova,’ sisazi ukuba ‘yena wosixhasa.’ (INdu. 55:22) Siqinisekile ukuba uThixo “unako ukwenza ngaphezu koko sikucelayo nesikuthelekelelayo.” (Efe. 3:20) Khawufan’ ucinge nje​—akayi kusinika okuninzi, engayi kusinika intabalala, kodwa uya kusinika “ngaphezu koko sikucelayo nesikuthelekelelayo”!
9. Sinokuqiniseka kangakanani ukuba uYehova uza kusisikelela?
9 Ukuze sifumane umvuzo, kufuneka simthembe ngokupheleleyo uYehova size sithobele ulwalathiso lwakhe. UMoses wathi kumaSirayeli: “Ngokuqinisekileyo uYehova uya kukusikelela ezweni elo akunika lona uYehova uThixo wakho ukuba ulihluthe njengelifa, ukuba nje kuphela uthe waliphulaphula ngenyameko ilizwi likaYehova uThixo wakho, wawenza wonke lo myalelo ndikuyalela wona namhlanje. Ngokuba eneneni uYehova uThixo wakho uya kukusikelela kanye njengoko ekuthembisile.” (Dut. 15:4-6) Ngaba uyamthemba uYehova ukuba uza kukusikelela xa uqhubeka uthembekile kuye? Zininzi izizathu zokumthemba.
10, 11. UYehova wamvuza ngantoni uYosefu?
10 IBhayibhile yabhalwa ukuze incede thina. Inamabali amaninzi abonisa indlela uThixo awabavuza ngayo abakhonzi bakhe. (Roma 15:4) UYosefu wayengomnye wabo bakhonzi. Emva kokwenzelwa iyelenqe ngabantakwabo nobuxoki obathethwa ngumfazi wenkosi yakhe, wazibona sele elibanjwa kwintolongo yaseYiputa. Ngaba loo nto yamohlukanisa noThixo wakhe? Nakanye! ‘UYehova waqhubeka enoYosefu waza wamenzela ububele bothando, uYehova wayenoYosefu, yaye oko uYosefu wayekwenza, uYehova wayekuphumelelisa.’ (Gen. 39:21-23) Ngaloo maxesha obunzima, uYosefu walindela kuThixo wakhe ngomonde.
11 Kwiminyaka kamva, uFaro walikhulula eli khoboka lithobekileyo waza walenza isekela lakhe eYiputa. (Gen. 41:1, 37-43) Xa umkakhe wamzalela oonyana ababini, “uYosefu wamthiya owamazibulo igama elinguManase, kuba wayesithi, ‘UThixo undenze ndazilibala zonke iinkathazo zam nayo yonke indlu kabawo.’ Waza owesibini wamthiya igama elinguEfrayim, kuba wayesithi, ‘UThixo undenze ndaqhama ezweni leentsizi zam.’” (Gen. 41:51, 52) Ngenxa yokuhlala kukaYosefu ethembekile kuThixo, wavuzwa ngeentsikelelo ezasindisa ubomi bamaSirayeli namaYiputa. Ingongoma nantsi, uYosefu wayeqonda ukuba nguYehova owamvuzayo waza wamsikelela.​—Gen. 45:5-9.
12. Yintoni eyanceda uYesu wahlala ethembekile xa wayevavanywa?
12 UYesu Kristu naye waqhubeka emthobela uThixo naxa wayejongene neemeko ezininzi ezazivavanya ukholo lwakhe, ibe wavuzwa. Wancedwa yintoni? ILizwi likaThixo liyasichazela: “Ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wasinyamezela isibonda sentuthumbo, elidela ihlazo.” (Heb. 12:2) Kwakumvuyisa kakhulu uYesu ukungcwalisa igama likaThixo. Loo nto yamenza wathandwa nguYise waza wanikwa amawonga angakumbi. IBhayibhile ithi: “Wahlala phantsi ngasekunene kwetrone kaThixo.” Iphinda ithi: “UThixo wamphakamisela kwisigxina esongamileyo waza ngobubele wamnika igama elingaphezu kwawo onke amanye amagama.”​—Fil. 2:9.
UYEHOVA AKAKULIBALI OKO SIMENZELA KONA
13, 14. UYehova uvakalelwa njani ngezinto esimenzela zona?
13 Siqinisekile ukuba uYehova uyayixabisa yonke imigudu esiyenzayo ukuze simkhonze. Uyaqonda ukuba sisenokuzeya okanye singazithembi. Uyavelana nathi xa iingxaki zemali, impilo okanye iimvakalelo zethu zibangela ukuba singakwazi ukumkhonza kakuhle. Masimthembe uYehova ukuba uziqonda kakuhle izinto abakhonzi bakhe abazenzayo ukuze bahlale bethembekile kuye.​—Funda amaHebhere 6:10, 11.
14 Masikhumbule nokuba, sinokuthetha ‘noMphulaphuli wemithandazo’ siqinisekile ukuba uza kuzimamela izinto ezisixhalabisayo. (INdu. 65:2) ‘UBawo onenceba noThixo wentuthuzelo yonke’ uya kusinceda sonwabe size siqinise nobuhlobo bethu naye, mhlawumbi esebenzisa abanye abakhonzi bakhe. (2 Kor. 1:3) UYehova uyavuya xa sibavela abanye abantu. “Obabala isisweli uboleka uYehova, yaye impatho yakhe uya kumbuyekeza ngayo.” (IMize. 19:17; Mat. 6:3, 4) Ngoko ke, xa sinceda abantu abasebunzimeni, iba ngathi siboleka uYehova. Uya kuyibuyekeza loo nto intle siyenzileyo.
UMVUZO NGOKU, NANGONAPHAKADE
15. Nguwuphi umvuzo okhangele phambili kuwo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
15 Abathanjiswa bomelezwa kukwazi ukuba baza kufumana ‘isithsaba sobulungisa, eya kuthi iNkosi, umgwebi olilungisa, ibanike sona njengomvuzo ngaloo mini.’ (2 Tim. 4:7, 8) Noko ke, ukuba uThixo ukunike ithemba elahlukileyo kwelo, ungaziva uqhathiwe. Izigidi ‘zezinye izimvu’ zikaYesu zinethemba lokuphila ubomi obungenasiphelo kwiparadesi esemhlabeni kwixesha elizayo. Kuloo paradesi, ‘ziya kuziyolisa ngokugqibeleleyo ngobuninzi boxolo.’​—Yoh. 10:16; INdu. 37:11.
16. Isinceda njani eyoku-1 kaYohane 3:19, 20?
16 Maxa wambi, usenokucinga ukuba incinane into oyenzayo okanye uzibuze enoba uYehova uyakholiswa na yimigudu yakho. Usenokude uthandabuze ukuba ufanele uwufumane umvuzo. Kodwa ke, ungaze ulibale ukuba “uThixo mkhulu kuneentliziyo zethu yaye uyazazi zonke izinto.” (Funda eyoku-1 kaYohane 3:19, 20.) Uyamvuza nabani na omkhonza kuba enokholo kuye yaye emthanda, nokuba loo mntu ucinga ukuba incinane into ayenzayo.​—Marko 12:41-44.
17. Ziintoni esivuzwa ngazo kwangoku?
17 Nangona bephila kwimihla engendawo yeli hlabathi likaSathana, uYehova usabasikelela abakhonzi bakhe. Uyaqiniseka ukuba bayakhula kwiparadesi yokomoya enokutya okuyintabalala okuqinisa ukholo. (Isa. 54:13) Njengokuba uYesu wayethembisile, uYehova usivuza kwangoku ngentsapho yabazalwana noodade esehlabathini lonke. (Marko 10:29, 30) Ngaphezu koko, abo bamfuna ngenyameko uThixo bafumana iintsikelelo ezingenakuthelekiswa nanto zokuba noxolo lwengqondo, ukwaneliseka nolonwabo.​—Fil. 4:4-7.
18, 19. Bathini abakhonzi bakaYehova ngomvuzo abawufumanayo?
18 Abakhonzi bakaYehova ehlabathini lonke bayavuma ukuba uyabavuza. Ngokomzekelo, uBianca waseJamani uthi: “Andiyeki ukumbulela uYehova ngokundinceda kwizinto ezindixhalabisayo nangokundixhasa imihla ngemihla. Kaloku ngumbhodamo phandl’ apha yaye ikamva limfiliba. Kodwa ekubeni ndisebenza ngokusondeleyo noYehova, ndiziva ndikhuselekile. Nanini na kukho into endiyincamayo ngenxa yakhe, undivuza ngokuyintabalala.”
19 Cinga nangoPaula waseKhanada, oneminyaka eyi-70, onengxaki yomqolo. Uthi: “Ukungakwazi ukuhamba akuthethi ukuba andikwazi ukushumayela. Ndishumayela ngezinye iindlela, njengokusebenzisa ifowuni okanye ngokungacwangciswanga. Ndinencwadi endibhala kuyo izibhalo nezinye izinto ezikwiincwadi zethu ukuze ndizikhuthaze ngazo. Ukuba sikhangele phambili kwizithembiso zikaYehova, ukutyhafa kuba yinto nje efika idlule. Nokuba zinjani na iimeko zethu, uYehova uyasinceda.” Mhlawumbi imeko yakho yahlukile kwekaBianca okanye ekaPaula. Kodwa ke, mhlawumbi uyayikhumbula indlela uYehova aye wakuvuza ngayo wena nabanye abantu obaziyo. Kuya kukunceda kakhulu ukucinga ngendlela uYehova akuvuza ngayo ngoku, nangendlela aza kukuvuza ngayo kwixesha elizayo.
20. Yintoni onokuqiniseka ngayo xa uqhubeka uzilahlela nofele ekukhonzeni uYehova?
20 Ungaze ulibale ukuba uya kufumana “umvuzo omkhulu” xa uthandaza ngokusuk’ entliziyweni kuThixo. Qiniseka ukuba ‘wakuba ukwenzile ukuthanda kukaThixo, uya kwamkela inzaliseko yesithembiso.’ (Heb. 10:35, 36) Masiqhubeke siqinisa ukholo lwethu size sizilahlele nofele ekukhonzeni uYehova. Oku, siya kukwenza sisazi ukuba uYehova uza kusivuza ngoko kusifaneleyo.​—Funda amaKolose 3:23, 24.